UAE ayaa carbinaysa maleeshiyaad Yemen ku sugan
Weerar istish-haadi iyo inghimaasi ah ayaa lagu qaaday Saldhig Melleteri oo Maleeshiyaad taabacsan Imaaraatka Carabta ay ku leeyihiin Koonfurta Yemen. Khasaara lixaad leh ayaa maleeshiyaad ashahaadda ladirir ah oo dowladda Imaaraatka tababartay kasoo gaaray weerar xooggan oo mujaahidiinta ansaaru shareecah kula beegsadeen Koonfurta wadanka Yemen.
Wararka ka imaanaya gobolka Abyen ayaa sheegaya in mujaahidiintu saaka aroortii hore duullaan ballaaran ku qaadeen magaalada Muudiyah oo saldhigyo malleteri ay ku leeyihiin ciidamada loo yaqaan (Alxizaamul amni) oo ay ciidamo loo tababaray ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
War rasmi ah oo kasoo baxay Ansaaru Shareecah ayaa lagu sheegay in weerarka lagu daah furay gaari miinaysan oo lagu qarxiyay saldhig dhaca bariga magaalada Muudiyah kadibna waxaa xigay dagaal fool ka fool ah oo xoogag inghimaasiyiin ah ay gudaha ugu daateen saldhigga.
Wararku waxay sheegayaan in ayaa sheegaya in 50 Askari ay ku dhinteen weerarka oo muddo saacada ah qaatay halka 50 kale ay ku dhaawacmeen, Bayaan kasoo baxay Ansaaru shareecah ayay ku sheegtay mas’uuliyadda weerarkan iyadoona xaqiijisay in howlgalkan uu Jawaab celin ku ahaa dhibaatada ciidamada imaaraatka ka wadaan Yemen.
Maleeshiyaadka Al Xizaamul Amni ayaa bilihii lasoo dhaafay gobollada Abyen,Shabwah,Xadramuut iyo Caden ka waday howlgallo raaf ah oo ay ku qabqabanayaan dhalinyarada muslimiinta iyo culimaa’udiinka caanka ah waxaana dadkaas loola dhaadhiciyaa xabsiyo qarsoodi ah oo dowladda imaaraatka ka furatay Koonfurta Yemen.
Weerarkan ayaa imaanaya xilli xiisada colaadeed oo u dhaxeeya dhinacyada cadawga dhaxdooda ay ka taagantahay magaalada Caden isalmarkaana siyaasiyiin ay maalgelisay xukuumadda Abu Dhabi ay ku goodiyeen in dowlad goboleed ka dhisayaan Koonfurta wadankaasi.